यो घरमा भर्खरै के भयो यस्तो ? स्थानियाहरुको भागाभाग – Complete Nepali News Portal
यो घरमा भर्खरै के भयो यस्तो ? स्थानियाहरुको भागाभाग
काठमाडौ । पछिल्लो समय नेपाल लगायत बिश्वनै त्रसित छ किनकि कोरोना भाईरसले सबैलाई घरमा बस्न लगाएर आफू बिश्व भ्रमणमा निस्किएको छ भन्दा फरक पनि नपर्ला ? कतिपय देशमा त अझैपनि लकडाउन र निषेधज्ञानै रहिआएको छ भने कसैले संक्रमितको संख्या हेर्दै यसलाई तोडदै पनि गएका छन । हो आज हामी कुरा गर्दैछौ हाम्रै देशको राजधानी काठमाडौ खरीबोटमा रहेको एउटा आइसोलेसन घरको । यो आइसोलेसन रहेको ठाउ हो बनस्थली खरिबोट जहा चर्चित हास्यकलाकार बल्क्षी ध्रुबेको फुटसल पनि रहेको छ । बल्क्षी ध्रुबेको फुटसलको छेमा रहको आइसोलेसनमा अहिले बिदशेबाट आएका थुप्रै नेपालीहरु छन । कोही पोजिटिभ छन त कोही नेगेटिभ छन । सबै सरकारको आदेश र ब्यवस्था अनुसार त्यहा बसेका छन । तर पछिल्लो समय त्यहा रहेकाहरुको ब्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ ।
यही कुरा देखेर त्यहाका स्थानियहरु एकाएक आक्रोशित पनि भएका छन । र त्यहाको फोहोर ढल सिधै आएर स्थानियको घरघरमा पसेपछि र खुल्लम खुल्ला भएपछि कोरोना सर्ने त्रास पनि अहिले बढेको छ । यसको अर्थ यो हो कि त्यहाको ब्यवस्थापन अहिले एकदमै दिन प्रतिदिन खल्लो भइहेको छ र जसरी पछिल्लो समय संक्रमित बढेका छन त्यसैगरि त्यहा संक्रमितबाट आएको ढलले त्रास झन बढाएको छ भने यसैबिच यसै घटनामा एक जना फेन्ट अर्थात बेहेोस पनि भएका छन त्यही कारणले गर्दा, हेरौ |